Khilaafka Ciidul-Fitriga Sanadka 1441H – Mecca Al -Mukarama Foundation
Bilashadii Bisha Barakaysan ee Ramadaan ayaa dalka si isku mid ah looga wada soomay iyada oo aan la soo werin wax khilaaf ah oo ku aaddan billowga maalinta koowaad ee Ramaadaanka.
Waxaa si weyn la isugu khilaafay oo Soomaaliya oo aan lagu tirin jirin dawladaha ku horreeya ee sooma ama ciida caalamka Islaamka ayaa sanadkaan khilaaftay oo ay Wasaaradda Awqaaftu shaaca ka qaadday xilli saq dhexe ah in maalinta Sabtiga ee ku aaddan 23ka bisha May 2020 ay tahay maalinta koowaad ee Ciidul-Fitriga 1441H.
Dadka intiisa badan oo ku seexday in berri ay tahay maalinta 30aad ee bisha Ramadaan horena Wasaaradda Awqaaftu u sheegtay ayaa ku waaberiistay Takbiirta Ciidda oo Masaajidda qaar laga maqlayey, tani waxay dad badan ku ridday jahwareer iyada oo dadka qaarkiis ku qanceen Takbiirta iyo go’aanka isbeddelay ee Wasaaradda Awqaafta halka qaar kalena ay soonkooda sii wateen.
Waxaa mucjiso noqotay in Xaramka oo laga soomman yahay Soomaaliya laga ciido, waa wax ku cusub go’aanka Wasaaraddeenna Awqaafta ee shaacisay bilasha bisha Shawaal, si kastaba ha ahaatee arrimaha la xiriira cibaadada dadka Muslimiinta ayaa mudan in xil la iska saaro oo uu jiro guddi culumada diinta iyo kuwa cilmiga xiddigiska oo isku dhafan oo la socda bilahada bilaha Soon iyo Soon-fur si inta badan xaqa loo waafaqo.
Masaajid badan oo aan saaka lagu tukan Ciidda ayaa la filayaa in maalinta berri laga maqlo takbiirta ciidda laguna oogo salaadda.
Waxa aan u soo jeedinaynaa Culimada Soomaaliyeed in ay awooddooda iyo aqoontooda isugu geeyaan sidii si wadajir ah loo wada oogi lahaa shacaa’irta diinigi si loo muujiyo midnimada iyo awoodda Muslimiinta.